Musharax Shire Xaaji faarax oo ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda dagaal ee gobolka Sool (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 29, 2013 2:51 b 0
Boosaaso, November 29, 2013 – Musharax Shire xaaji faarax oo ka mid ah ragga u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland ayaa xalay ka hadlay dagaalkii? maalin ka hor ka dhacay duleedka degmada Taleex iyo deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka Sool.
?Waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo si deg deg ah, wax kastana wada xaajood lagu dhameeyo.? Ayuu yiri musharax shire isagoo intaas ku daray ?dhacdooyinkan oo kale maaha in la siyaasaddeeyo oo lagu daadiyo dhiig sokeeye.?
Musharax shire Xaaji ayaa tilmaamay in aysan faa?iido ku jirin dagaallada oo inta badan khasaare nololeed iyo mid maalba bulshada u horseeda.
Gobolka Sool ayaa waxaa ka taagan xiisad collaadeed oo u dhexaysa dhinacyo ka wada tirsan maamulka Khaatumo ee deegaankaas, dagaalka ayaa dorraad ka bilowday aaga Tuka-raq isagoo shalayna ka dhacay degmada Taleex.
Qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta Puntland ayaa dagaalka dheleeceeyey isla markaasna ku baaqay in xiisada la qaboojiyo oo wax kasta lagu dhameeyo wada-hadal iyo is afgarad
Dhegeyso:- ?War-bixin uu ka diyaariyey Abdirahman Ahmed Yuusuf oo daljir ka tirsan
Guddiga arrimaha gudaha ee baarlamanka Britian oo ku baaqay in laga noqdo mamnuucista Qaadka